တစ်ခုမှာ Pack ကိုအတွက်တွေ့ဆုံဂျက်စဲလ်တယ်ရီယာတစ်ဦးကခွေး - သတင်း Rule
စမတ် Speakers - ဝယ်မယ့်လမ်းညွှန်
တစ်ခုမှာ Pack ကိုအတွက်တွေ့ဆုံဂျက်စဲလ်တယ်ရီယာတစ်ဦးကခွေး
ကျွန်တော်တို့ဟာအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ထင်အကျိုးကျေးဇူးများအများစုကိုပေးမညျ့သူအပေါင်းအဘော်ကိုရှာဖွေချင်တယ်. ကောင်းစွာ, သငျသညျအတန်ငယ်တ-In-အထုပ် PAL သောခွေးသည်ရှာကြသည်လျှင်, သင်ရှာစေခြင်းငှါ, ဂျက်စယ် Terriers လုံလောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့.
ဒါဟာခွေးတစ်ကောင်၏မျိုးဆက်များကပြောသည်ခဲ့သည်, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကလူငယ်တစ်ဦးခရစ်ယာန်ဓမ္မကျောင်းသားတစ်ချိန်ကသူ့မျက်စိနှင့်နားကိုအပေါ်အစက်အပြောက်ရှိကြောင်းအဖြူရောင်တယ်ရီယာခွေးနှင့်အတူ milkman တွေ့ဆုံခဲ့ယောဟနျသစယ်အမည်ရှိသော.
သူပထမဦးဆုံးမြင်ခွေးအမည်ရှိ “ကို Trump” အခြားအရာကနေ 60 Terriers အမျိုးအစားများနောက်ပိုင်းတွင်မှရပ်ကြီးခဲ့ကြ.
မြေပြင်ပေါ်တွင်နှင့်ကူးဖို့တယ်ရီယာခွေးရဲ့အခြေခံအကျဆုံးသဘာဝနှင့်အတူ (လမ်းဖြင့်တယ်ရီယာခွေးလက်တင်သက်တမ်းမှလာ “terra” သောမြေကြီးမကိုဆိုလိုသည်), ဂျက်စယ် Terriers လည်းအမဲလိုက်အဘို့လိုက်ရှာနှင့်အပေါ်ယံအခွံမှသဘောထားရှိ.
ထို့ကြောင့်, ဘဏ်ဍာသင်ျဂွိုဟျဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးက hidden ဘဏ္ဍာကို recover မှမြေဆီလွှာကိုတူးကနေသူတို့စုဆောင်းထားတဲ့အမှိုက်ကိုပယ်သတ်မှတ်ထားဖို့သကဲ့သို့သူတို့လုံလောက်တဲ့ဖြီးလိမ်းပုံပေးသင့်ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့ထားရှိမည်.
အကောင်းဆုံး ratter, ဂျက်စယ် Terriers ကောင်းသောဖြစ်ထေူ “နေရာထိုင်ခင်းထိန်းသိမ်းသူများ” သူတို့အိမ်ကနေမှအများဆုံးကြွက်စောင့်ရှောက်ကတည်းက.
ဂျက်စဲလ်တယ်ရီယာ (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
ဒီတယ်ရီယာခွေးများ၏ရပ်ကွက်အတွင်း၌ဖြစ်ဖြစ်ပျက်ကမဆိုကံကြွက်က၎င်း၏လက်ငင်းပျက်စီးခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖို့သေချာပါသည်. ထို့ကြောင့်, ပိုင်ရှင်တွေတစ် PAL တစ်ဦးခွေးနှင့်ကြောင်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုရှာတွေ့.
ထိုသူတို့သညျအလှနျအသံနိုင်ပါတယ်စဉ်, သူတို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းရန်တွေ့သောအခါထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုသာ barks.
သူတို့ဟာသော်လည်းဆိုးပေါ်လာပါဘူး. ဒါပေမဲ့သူတို့ကခြိမ်းခြောက်မှုအနံ့တခါ, သူတို့ကသူစိမ်းဆီသို့ဦးတည်သတိပေးအဖြစ်အစေခံနိုင်ကြောင်းမှထုတ်ပြန်သောပယ်ဖျောပွနိုငျ.
သို့သော်, သူစိမ်းပိုင်ရှင်ဖြင့်အိမ်တော်ထဲသို့ကုန်အံ့ဖြစ်ပါတယ်တခါ, တစ်ဂျက်စယ်ပြီးသားသူသို့မဟုတ်သူမ၏အထံသည်းခံနိုင်.
သို့သော်, သူတို့စော်ကားနေကြတယ်သို့မဟုတ်မလျော်ကန်သောကုသမှုပြခဲ့တခါ, ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်မတော်တဆဖြစ်စေခြင်းငှါ, သူတို့ရန်လိုအပြုအမူတွေကတဆင့်တုံ့ပြန်နိုင်.
သူတို့ကအစသူတို့ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးနှင့်ကောင်းမွန်သောဝိညာဉ်သည်မှတ်သားထားတဲ့. ဤရွေ့ကားဝိသေသလက္ခဏာများအမှုအရာ၌မိမိတို့သိချင်စိတ်ကတဆင့်မြင့်မား observable ရှိနိုင်ပါသည်.
feisty နှင့်ကောင်းမွန်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အတူ coupled, ဒီ PAL ထားပြီးဖန်သားပြင်အတွက်အမည်များကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ.
Wishbone လိုလျှင်, Milo (အဆိုပါမျက်နှာဖုံးကနေ) နှင့် Eddie (အ Frasier မှ) သငျသညျအပျေါခေါင်းလောင်းမြည်ပြီးတော့သင်ဤခွေးကိုအသိအမှတျပွုနိုငျကွောငျးသခြောရှိပါတယ်.
ဖြီးလိမ်းပုံနှင့်အတူဂျက်စယ်တရားမျှတတဲ့ကောင်းစွာ. အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား၏တစ်ဦးခွေး, ဒီဖောက်ဖြီးလိမ်းပုံလိုအပ်ချက်များကိုဖြင့်သင်တို့ကိုအခွန်မည်မဟုတ်.
Star Wars: အဆိုပါအင်အားစုနိုးထကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Long-ပျောက် Van Gogh သည်ပန်းချီအမ်စတာဒမ်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြသ
The Beatles are the most popular ‘pirated...
Mark Zuckerberg ဟာအပြီးမွတ်စလင်များထောက်ခံကြောင်းပြောသော ...
20732	0 ခှေး, Frasier, ဂျက်စယ်, ဂျက်စဲလ်တယ်ရီယာ, ယောဟနျသစယ်, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်က, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန်, တယ်ရီယာခွေး
← အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ရိုက်ကူးတစ်ဦးက Reality TV ကိုပြသပါ?! တစ်ဦးကတောင်တန်းစက်ဘီးစီးလမ်းညွှန်ဝယ်ယူ →
The Best စမတ်လုံခြုံရေးကင်မရာ [VIDEO]
ဂုဏ် 10 ဆန်းစစ်ခြင်း
မေ 29, 2018
Movavi Video Editor ကို: အားလုံးသင့်ရဲ့ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းလိုအပ်ချက်များအဖြေ
မေ 23, 2018
OnePlus 6: အားလုံး Glass ကို, ပိုကြီးတဲ့ Screen ကို
မေ 18, 2018
© 2018 မူပိုင်ခွင့် Newsrule.com